Atôna - Wikipedia
I Atôna dia andriamanitr' i Egipta tamin' ny Andro Taloha. Fantatra indrindra amin' ny maha andriamanitra tsy naharitra azy ao amin' ny angom-pedrà egiptiana izy nandritra ny fanapahan' i Amenôtepa IV izay niova anarana hoe Akenatôna (taona 1353 - 1337 tal. J.K.).
Ny fiandohany dia tranainy kokoa noho ny maha fototra hita maso ny andriamanitra Atoma-Ra azy araka ny lazain' ireo lahatsoratra hita tamin' ireo piramida tamin' ny fiafaran' ny Empira Voalohany. Tamin' ny Empira Vaovao dia teo ambany fiarovany i Totmôsisy III ary i Amenôtepa III izay atao hoe koa "Famirapiratan' i Atôna" dia nampirisika ny olona hanao fanompoam-pivavahana ho azy.
Nametraka miandalana avy eo amin' ny fomba tampoka ny fivavahana henôteista voalohany fantatra teo amin' ny tantara i Akenatôna, ka ny fivavahana amin' i kapila-masoandron' i Atôna no nomeny tombondahiny.
Ny fivavahana amin' i Atôna izay fivavahana mônôteista fantatra voalohany eto amin' izao tontolo izao, araka ny hevitry ny olona sasany (nefa toherin' ny olona hafa sasany koa, izay mihevitra fa henôteisma na mônôlatria no tena izy) dia naharitra valo taona.
I Akenatôna irery ihany no lazaina fa ntarika izany fiovana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana izany, nefa mety tsy nanao afa-tsy nanery ny hanatanterahana ny firehana izay efa nisy tamin' ny fanapahan' ny rainy Amenôtepa III izy. Nivavahana noho izany ny Kapila-Masoandro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Atôna&oldid=1037776"
Voaova farany tamin'ny 13 Septambra 2021 amin'ny 14:13 ity pejy ity.